Maxay tahay sababta ay Somaliland u xakameynayso sameecadaha Masaajida? - BBC News Somali
Image caption Maxaa loo xakameeyay sameecadaha masaajidyada?
Wasaarada Diinta iyo Awqaafta ee jamhuuriyadda iskeed madaxbanaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland ayaa baaq u dirtay masuuliyiinta masaajida Somaliland, waxay amar ku bixiyeen in la xidho ama la yareeyo dhawaqa sameecadaha loo adeegsado masaajida waqtiga Taajudka, dad waynaha ayaa arinkan u arkay in uu yahay mid aan loo baahnayn waqtigan in laga hadlo.
''Anigu waxan u arkaa in aan la joojin waqtigan,waayo arinkan wasaaradu kaligeed lamaysan imaan, waxay sheegeen in loo so dacwooday'' sidaas waxa BBC-da u sheegay Muse oo kamid ah dadweynaha ku nool magaalada Hargeysa.
Dadwaynaha qaar ayaa aaminsan in arinkan uu yahay mid loo baahnaa.
'' Waxaan kamid ahay Naafada Hargaysa ku nool, waxan la qabaa go'aanka gudiga Awqaafta ay soo saareen oo ah in hoos loo dhigo Taajudka oo kaliya, waayo waxa jira dad xanuunsan arinkan yaan la siyaasadayn'' sidaas waxa BBC-da u sheegay Caynaan Axmed Ismaaciil.
Deegaanada Soomaalida ayaan looga baran arrinkan oo kale maadaama dadka Soomaalidu yihiin boqolkiiba boqol Muslim.
Maxaa sababay in masaajid ku yaalla Malaysiiya laga mamnuuco dalxiisayaasha?
Dad masaajid agtii ku sugnaa oo gaadhi lagu jiirsiiyay London
Maxay Culimadu kaga jawabeen Arinkan
Image caption Maamulka ayaa sheegay in cibaadadu aysan dhib ahayn
Culimada ayaa go'aankan soo dhaweeyey.
''Arinkan ay wasaradu ku doonayso in la joojiyo sameecadaha dibada oo loo wareego kuwa gudaha waa arin fiican,shareecadana waafaqsan, in qirada kor loo qaado oo smeecadaha la isticmaalo waxey waafaqsan tahay Sunnadii Nabisa(NNK) Rasuulku wuxu ku so baxay Asxabadii oo tukanaysa oo kor u qaadaya Quraanka,wuxu u sheegay qofka tukanaya illaahay ayuu la hadlayaa,qof walba ha eego sida ad illaahay ula hadlaya oo badhkiinba badhka kale quraanka kor ha ugu qaadin'' sidaas waxa BBC-da u sheegay ,Sheekh Cabdirasaaq Xuseen Cali (Sheekh Albaani) oo kamid ah macalimiinta kuliyada shareecada jaacadda Golis wax ka dhiga.
Wasaarada ayaa ku baaqday in ay ka ee gayaan dhinaca Diinta
''Bilowgii Ramadaan qodobadii aannu kala hadalnay cilimada ayay kamid ahayd,in marka salaada Taajudka la gaarin aan la isticmaalin Sameecadaha,waxan leenahay arintaas halaga waantoobo illaahay halaga baqo oo ayaan lagu dhibataynin wanaaga iyo Cibaadada,dadka waxa ku jira dad jilicsan ama xanuunsan,cabashooyin badan ayaa soo gaartay wasaarada,waxan faraynaa ha isticmaalina ama yaraysta oo gaabiya'' sadaas waxa shir jaraa'id ku sheegay agaasimaha wasaarada Awqaafta Soomaaliland Aadan Cabdillaahi Cabdalle.
Sameecadaha waawayn ee habeenkii masajidada ayaa laga maqlaa dhamaan magaalooyinka Soomaalida,si dadku ay u gutaan cibaadooyinka kala duwan ee Ramadaanka.
Soomaali badan oo ku nool qurbaha ayaa kala kulma wadamada ay ku nool yihiin cadaadis la saaro in ay u isticmaalaan Adinkan salaada jimacaga in loo isticmaalo sameecadaha si loo ogaado in ay tahay maalin Jimco ah, si salaada dadku u gutaan,arinkaas oo ay ku sifeeyaan cadaadis la saarayo dadka Muslimka.